इन्द्रजात्राको 'लिंगो' होइन 'यः सिं' भनौं
काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य जात्रामध्येमा पर्ने इन्द्रजात्रा मंगलबारबाट सुरु भएको छ । हनुमानढोका दरबार छेउको कालभैरव मन्दिर छेउमा यः सिं ठड्याएपछि यो जात्रा सुरु हुन्छ । नेवारी समुदायमा यो पर्वलाई येंया इन्द्रजात्रा भनेर पनि चिनिन्छ ।
भाद्र द्वादशी तिथिमा ३३ फिट अग्लो काठको यः सिं डठ्याएपछि इन्द्रजात्रा सुरु भएको मानिन्छ । संस्कृतिविद् यज्ञमानपति वज्राचार्यका अनुसार पर्व सुरु भयो भन्ने संकेतको रूपमा यः सिंठड्याउने चलन छ ।
भाद्र शुक्ल द्वितीय तिथिमा साइत निकालेर काठ लिन गएपछि इन्द्रजात्रा प्रारम्भ हुन्छ । हनुमानढको दरबारभित्रको नासलचोकमा मानन्धर समुदायले विधिवत् पूजा गरेर यः सिंका लागि काठ लिन जाने चलन छ । टाउकोमा सेतो फेटा बाँधेर जम्मा भएका मानन्धर समुदायलाई पण्डितले टीका लगाएर बिदा गर्ने चलन छ ।
गुरुजी पल्टनका सेना कालो पोसाक लगाएर तैनाथ सेना अघि लाग्छन् । गुरुजी पल्टनकै पण्डितले टीका लगाएर बिदा गर्ने चलन छ । हनुमानाढोका दरबारको पश्चिमतिर पञ्चमुखी हनुमानको मूर्ति भएको ढोकाबाट एक–एक गरेर निस्करे काठ काट्न निस्केपछि काठ नल्याएसम्म भित्र मानन्धर समुदायभित्र छिर्न नहुने परम्परा छ । इन्द्रजात्रामा विभिन्न जातजाति मिलेर व्यवस्थापन गर्छन् । त्यसमध्ये यः सिं व्यवस्थापन गर्ने काम मानन्धर समुदायको हो ।
लिंगो होइन, यः सिंइन्द्रजात्राको यः सिंलाई लिंगो भन्ने गरेकोमा नेवार समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । संस्कृतिविद् यज्ञमानका अनुसार यःसिंलाई लिंगो भन्नु विकृति हो । ‘य: भनेको राम्रो हो । सबैले मन पराएको हो,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘सिं भनेको काठ हो । सबैले मन पराएको काठ भएकाले यसलाई नेपाल भाषामा यःसिं भनियो ।’
इन्द्रजात्रामा मात्र नभई उपत्यकाका मुख्य जात्रामा यः सिं ठड्याउने चलन छ । पाहाचार्य, बिस्केटलगायत जात्रामा यः सिं ठड्याउने चलन छ । ‘अग्लो ठाउँमा यः सिं ठड्याएपछि अब जात्रा सुरु भएछ भनेर सबैले सर्वसाधारणले बुझ्छन्,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘यःसिं ढालेपछि जात्रा सकिएछ भनेर बुझ्न । जात्राको सुरु र अन्त्य थाहा होस् भनेर यःसिं ठड्याउने परम्परा सुरु भयो ।’
काठ लिन नालाको जंगलमा जाने चलन छ । द्वितीय तिथिको राति साइत जुराएर काट्ने चलन छ । शिवरात्रि तिथिमै राम्रो काठ छान्ने विधि पूरा गरिन्छ । ‘पहिला यहाँबाट (हनुमानढोका) बाट हिँडेरै जाने चलन थियो । त्यही भएर काट्ने साइत बेलुकाको निकालिने गरिएको हो,’ मानन्धर समाजका अध्यक्ष गजेन्द्रमान मानन्धरले भने, ‘अचले गाडीबाट गइन्छ । बिहानको साइत गरियो, अब बेलुका पुग्ने गरी गाडीमै गइन्छ । आज बेलुका विधि पुर्‍याइन्छ । बोको बलि दिइन्छ । रूख आजैचाहिँ ढालिँदैन किनभने खाल्डोतिर पर्ने डर हुन्छ । विधिपूर्वक चोट लगाएर बिहान काटिन्छ ।’
तृतीय तिथिको बिहानबाटै यः सिं हिँडाइन्छ । यसलाई तानेरै ल्याउने चलन छ । ‘पहिला मानन्धरले मात्रै तान्ने चलन थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अरूले पनि तान्छन् । उताका गाउँलेले पनि सहयोग गर्छन् ।’
दुई दिन हिँडाएर भोटाहिटीमा राख्ने चलन छ । भोटाहिटीबाट उठाउने काम धालासीका मानन्धरले गर्छन् । काय अष्टमी तिथिमा भोटाहिटीबाट हनुमानढोका दरबार लैजान गरिन्छ । कायअष्टमीमा हनुमानढोका ल्याइएको यःसिंलाई एकादशी तिथिमा डोरीले बाँध्ने काम हुन्छ । डोरी बाँध्ने काम चस्वाँद्धँ मानन्धरको सनाः गू खलःले गर्छ । द्वादशीको दिनमा सबै मानन्धर मिलेर यः सिं उठाउने काम हुन्छ । अनि इन्द्रजात्राको रौनक सुरु हुन्छ,’ मानन्धर भन्छन्, ‘इन्द्रजात्रको सुरु गर्ने काम पनि मानन्धरले गर्छन् । अन्त पनि यःसिं ढालेर मानन्धरले नै गर्छन् ।’
कमजोर गुणस्तरका सामान
पूजा गर्न लाग्ने सामान भने संस्थानले उपलब्ध गराउँछ । सबै पूजाका लागि झन्डै १४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको गुठी संस्थान काठमाडौं शाखाका प्रमुख प्रसाद जोशीले बताए । पूजाका सामान पनि कमजोर गुणस्तरका उपलब्ध गराउने कर्णेलचोकस्थित भगवती मन्दिरका पुजारी वैकुण्ठमान राज नवट गुनासो गर्छन् । नवटका अनुसार पूजा गर्न ४५ धार्नी ४ पाउ मासु चाहिन्छ ।
‘मासु पनि कमजोर गुणस्तरको किन्न मिल्ने भए मासु नै दिन्थ्यो । कमजोर किन्न नमिल्ने भएकाले पैसा दिन्छ । बजार भाउभन्दा निकै कम दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मासु किन्न १ सय २० रुपैयाँ दिन्छ, जब कि मासुको बजार भाउ ७ सय रुपैयाँ छ ।’
अरू पूजाका सामानचाहिँ बिग्रिएको, कुहिएको दिने गरेको उनले गुनासो गरे । संस्थानले पूजाको सामान ठेकेदारमार्फत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूजाका ८ दिनसम्म चल्छ । त्यसका लागि पहिलो दिनका लागि १ मुरी १९ पाथी स्याबजी चाहिन्छ । दोस्रो दिन १ मुरी चौध पाथी, तेस्रो दिन १ मुरी १२ पाथी, चौथो दिन १ मुरी ११ पाथी स्याबजी चाहिन्छ ।
‘यो किन्न मानाकै २० रुपैयाँ पर्छ, पुजारी नवट भन्छन्, ‘तर दिँदा पनि बजार भाउभन्दा घाटा पर्ने गरी दिन्छ ।’ २ पाथी गेडा मास, २ पाथी केराउ, ४ पाथी गहुँ, ३२ धार्नी रोटी, २ पाथी रक्सि, थुप्रै जाँड, कालो भटमास ८ पाथी चाहिन्छ । ‘यो सबै कुहिएको दिन्छ,’ नवट भन्छन्, ‘भक्तजन कुहिएको दियो भने रिसाउँछन् । गुठीले यस्तै दिन्छ, हामीले के गर्नु ? साह्रै समस्या बनाइदियो संस्थानले ।’
१८ लिटर भुटेको तेल चाहिन्छ । भुटेको तेल भनेर सोयाविन तेल दिने गरेको उनी गुनासो गर्छन् । शुद्ध घ्यू चाहिन्छ । तर शुद्ध घ्यू भनेर सोयाविन दिन्छ । ‘धर्मको नाममा भ्रष्टाचार भयो,’ उनी भन्छन्, ‘धार्मिक, सांस्कृति र परम्परा जोगाउन भनेर गठन भएको गुठी संस्थानले हाम्रो धार्मिक भावनामा निरन्तर प्रहार गर्दै आएको छ ।’
गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरी राम्रो गुणस्तरको सामान दिनकै लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘ठेकेदारले नराम्रो सामान दियो भने उहाँहरू सजग हुनुपर्‍यो,’ चौधरी भन्छन्, ‘हामीले नराम्रो सामान देऊ भनेको होइन । ठेकेदार नराम्रो दिए ।’
पुजारीको तलबसमेत नगण्य दिने गरेको छ । यहाँका सबै मठमन्दिरमा दिनहुँ नित्य पूजा गर्नुपर्छ । यो पूजा गरेबापत गुठीले वर्षभरिमा जम्मा १५ हजार रुपैयाँ मात्रै बढाउँछ । ‘दिनहुँ मन्दिर रुँग्नु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षमा १५ हजारले के गर्नु ? कसलाई भन्नु ? कहाँ जानु गुनासो गर्न ? कति गुनासो गर्नु ?’ धार्मिक, परोपकारी र सांस्कृतिक कार्य सञ्चालन गर्न स्थापना भएको हो गुठी संस्थान ।पर्वपूजा, जात्रा मात्रै होइन गुठी जग्गाको रेखदेखको जिम्मेवारी पनि पाएको छ संस्थानले । इन्द्रजात्रा, सेतो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा, साँखु, दक्षिणकाली, कीर्तिपुरको जात्रालगायत अदृश्य सम्पदाको पूजा खर्च गुठीले व्यहोर्दै आएको छ । यही संस्थानको स्थापना भएपछि जात्रा पर्व मनाउन अभिशापको दिन सुरु भएको शाक्य बताउँछन् । पहिला जात्रा पर्व मनाउन दुःख थिएन ।
इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिमा ३६ वटा खल गुठी संलग्न छन् । हरेक गुठीले आफ्नो क्षेत्रका मठमन्दिरमा जात्रा चलाउँछन् ।
खोलियो उपाकु मार्ग
धरहरा निर्माण गर्ने क्रममा बन्द गरिएको उपाकु मार्ग इन्द्रजात्राका लागि खुला गरिएको छ । स्थानीयवासीको चर्को विरोधपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरावरिपरि लगाएको जस्ताको बारमध्येबाट बीचका केही जस्ता निकालेर बाटो खुला गरिदिएको हो । यः सिं उठाउने दिन घरमा कोही मृत्यु भएको परिवारले बत्ती बालेर यो मार्ग घुम्ने चलन छ ।
यो रुट तीन घण्टाको छ । काठमाडौंको प्राचीन बस्तीको छेउमा पर्छ उपाकु मार्ग । उत्तर–पूर्वमा जमल हुँदै टुँडिखेल, दक्षिणमा टुकुको सीमा, पश्चिममा विष्णुमती उत्तरमा क्षेत्रपार्टी हुँदै घुम्ने गरिन्छ । यो मार्गमा ३ सय ६५ वटा बत्ती बालिने सम्पदा संरक्षण अभियन्ता उमेश स्थापित बताउँछन् ।
स्थापितका अनुसार यो मार्गमा नेवार समुदायभित्रका सिमान्तकृत जातिको बसोबास छ । आफ्नो घरपायकबाट बत्ती बाल्दै आउने भएकाले बस्तीमा रमाइलो हुन्छ । यो मार्गका सबै देवालयमा समेदु राख्ने चलन छ । समेदु भोजमा चाहिने सबै परिकार राखेर सजाइएको हुन्छ । यो मार्गमा अलग जातिले अलग ठाउँमा समेदु व्यवस्थापन गर्ने चलन छ ।
जमलमा खड्गी समुदाय, लगनमा पोडे समुदायले समेदु व्यवस्थापन गर्छ । ‘यो दिन सिमान्तकृत वर्गले विशेष उत्सवका रूपमा लिन्छन्,’ स्थापित भन्छन् । उपाकु मार्ग वर्षमा एक दिन मात्र हिँड्ने भएकाले पहिला, हिलैहिलो हुन्थ्यो । अहिले पनि यो मार्ग व्यवस्थित छ ।
सुनोद श्रेष्ठको ‘बरालिंदै हिँडे’ सार्वजनिक
बसन्ता प्रकृतिको “कलकल बग्ने”को भिडियो सार्वजनिक
कोरोना महामारीका बीच संयमित भएर टोपी दिवस मनाइने
पौष १० गतेबाट हल सञ्चालन गर्ने चलचित्र संघको घोषणा
'मै बनूँला माली' सार्वजनिक
पत्रकार पन्थीको कम्पन अडियोमा